11/04/2018 - Page 3 sur 3 -
Fitiliana aretina otisma tao Antsirabe : Ny 80 isan-jaton’ny zaza nahitana ny soritra aretina
Ao anatin’ny hetsika fitetezam-paritra tanteraka ny fikambanana “Autisme Madagascar” amin’izao fotoana izao, ho fampahafantarana sy ny fanentanana ny mponina amin’ny aretina otisma. Taorian’i Toamasina sy Moramanga dia tany Antsirabe indray ny ekipan’ny “Autisme Madagascar”, ny …Tohiny
Lohahevitra isan’ny goavana ao anatin’ny politika sy ny fitantanana ny firenena ny fampandrosoana. Raha te ho tonga amin’izany tanjona izany, dia ilaina ary zava-dehibe , hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fisandratana ara-toe-tsaina. “Ny fisandratana …Tohiny
Lany tsy nasiam-panovana sy tsy nasiam-panitsiana teny anivon’ny antenimieran-doholona omaly ireo lalàna fehizoro hifehy ny fifidianana eto amin’ny firenena. Niisa 54 ireo loholona niatrika ny fandaniana ireo lalàna ireo. Rehefa natao ny tsangan-tanana dia ny …Tohiny
Tsy ny lafiny ara-toekarena velively na ny lafin’ny fandriam-pahalemana no tena olana eto Madagasikara fa ny lafin’ny toe-tsaina, araka ny nambaran’ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina teny amin’ny BANI Ivato omaly. Io lafiny ara-toetsaina io no ilàna …Tohiny